Qurxinta tinta dabiici timaha
Ma doonaysaa inaad maqaarkaaga iyo wajigaaga quruxbadnaado oo uu dhalaalo adigoon isticmaalin wax chemicals ah aan isticmaaliin balse isticmaalaya waxyaabo. Baro sida lo qurxiyo timaha aadanboy. Deqa luul qurxinta dumarka 20 01. Youtube premium loading. Jilciso dabici ah tinta ku jilcineso ka faideyso. Farhiya qurxinta 23, views.
Mirahaan waxay tinta siiiyaan jileec, dhalaal iyo qoyaan. Waxay kobciyaan koritaanka tinta. Waxay tinta siiyaan nafaqo. Biyo ayaad ka karkarsanaysaa. Waxaad duraysaa miraha flax seed kadibna waad waalaqaysaa. Way isku dhegdhegaysaa hadii aan la walaaqin. You must log in to continue. Qurxinta jidhka o dabiciya. Timaha tintada ku massage habenki halmar malin tina halmar waxey kacawinesa xijabka tinta u.
Asc asxbta maanta mowduucee ka hadal naa. Hooyada uurka le iyo waxay ubaahab tahy. Aanka by sh cabdiraxmaan cismaan 20 11. Isku daawaynta xulbad iyo faa, iidada ku jirta fadlan ka faa, iidayso waa dhabar u roon dhudhun u. Ga oo yaraado way keentaa inay tinta khafiif noqoto, kadibne go. Do, sida bidaarta lagu yaqaanane meel gooni ah tinta kama haaddo ee marba meel ayay ka soo go. Waxa kaloo keeni karo, basada oo ku cuncunto oo qolof ka daadato, waa cudur maqaar basada galo ee fadlan la xiriir takhtar maqaar.
Saliidii tinta bixineysay kuuna. Shabakada waxaad kaheli kartaan videos kusabsan qurxinta dumarka dalyeelka timaha iyo barnaamijyo. Jilciso dabiici ah oo tinta u fiican. Nafaqo uroon tinta jajabaysa. Timaha waxaa si siman u xiiseeya daryeelkeeda lab iyo dhedig, wey shalleeyaan, weyna midabeeyaan.